C++ and Win32 — MYSTERY ZILLION
June 2008 edited July 2009 in C++
myanmaritpros မှာ C++ programming အကြောင်း tutorial လေးတစ်ခုတွေ့လို့ share လိုက်ပါတယ်..
C++ and Win32 Programming
သွားကြည့်ဖြစ်ရင် အကျိုးယုတ်မယ်မထင်ပါဘူး.. :39:
thx, thats good
ဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် C++ ကိုဘယ်မှာ Run ရမှာလဲ ပြောပေးကြပါဦးဗျာ
ဘောလုံးကွင်းဘေးက ပြေးလမ်းမှာ ချလိုက်ဗျ သူ့ဘာသာ Run လိမ့်မယ် :2:
အဲဒီထဲမှာ အကုန်ရေးထားတာပဲ... ဘယ်ဟာကိုမရှင်းတာလဲမသိဘူး..
Vs 2005 ကိုတော့ သုံးတယ်..
ဒီ tropic မှာပါတဲ့ c++ နှင့် win32 programming ရေးရာမှာ virus တွေပါရေးလိုရလားခင်ဗျာ..
Windows program တစ်ခုဘယ်လို ရေးလဲဆိုတာကိုရှင်းထားတာပါ...
win32 api တွေကိုတော့ သုံးရင်သုံးလို့ရမှာပေါ့...
အဓိကကတော့ သာမာန် vb တို့.. c# သမားတို့ဆို မမြင်နိုင်တဲ့ တစ်ကယ့် windows program တစ်ခုဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတဲ့ အကြောင်းကို ရှင်းထားတာပါ...
ဟေး ... h1n1 တော့ရမယ်ထင်တယ် ...
mfc နဲ့ win32 api ဘယ်ဟာ ပိုမိုက်လဲ.. ?? :106:
ကျွန်တော် ဖတ်ကြည့်တာကတော့ သူက C++ ကို VC++ ပြောင်းပြီးရေးထားတာ
ဒါပေမဲ့ C++ နဲ့ ဘာမှလဲဆိုင်ဘူး သူက html လိုလို asp.net လိုလို သုံးထားတာ
c++ လေ့လာနေဆဲ လူတွေသွားမဖတ်သင့်ဘူးထင်တယ် ပိုပြီးရှုပ်သွားမှာဆိုးလို့ C++ကို တော်တော်လေးရပြီဆိုမှ ဖတ်ကြည့်သင့်တယ်ဗျ
MFC & Win32 API များနှင့် မပါတ်သက်တာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာပါသော်လည်း နည်းနည်းတော့ ဝင်ပြီးလေရှည် အဲလေ စာရှည်လိုက်ပါဦးမယ်။:D MFC နဲ့ Win32 API ဘယ်ဟာ ပိုကောင်းလဲဆိုတာကတော့ ပြောရခက်မယ်ထင်တယ်။ ဒါကြောင့် အမြင်လေးတွေ ခွဲပြီးမြင်ကြည့်ရအောင်။
ပထမဆုံး Event တစ်ခုကိုစဉ်းစားကြည့်မယ်။ အခုနောက်ပိုင်း Language တွေမှာက Event ကိုကိုင်တွယ်တာက အင်မတန်လွယ်ပါတယ် Object တစ်ခုရဲ့ Event Handler တစ်ခုရေး ပြီးရင် ဘယ် Event ဖြစ်ရင် ဒါကိုခေါ်လို့ပြောလိုက် ဒါဆိုရင်ပြီးပြီ။ ဥပမာပြောရရင် Command Button တစ်ခုရဲ့ Click Event ဆိုပါစို့။ သေသေချာချာ စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ ဒါတော်တော်မလွယ်တဲ့ ကိစ္စပဲဗျ ကိုယ်တိုင်သာ ကိုင်တွယ်ရမယ်ဆိုရင် Mouse ဖြစ်ပျက်နေသမျှကို အသေးစိတ် ထိုင်ကြည့်နေမှရမယ်။ Click ဆိုတာကလည်း လူကနှိပ်ချင်တဲ့ နေရာကိုနှိပ်တာ သူနှိပ်တိုင်း ကိုယ့် Button နေရာဟုတ်သလား စစ်နေမှရမယ်ဗျ။ Application တိုင်းကသာ ဒါမျိုး Event ကိုကိုယ်တိုင် စစ်နေရမယ်ဆိုရင် ရေးဖို့ တော်တော်ခက်ခဲမယ်။ ဒါကြောင့် Window ကနေ ရှိသမျှ Event တွေကို ဒိုင်ခံပြီး ဖမ်းပေးတဲ့ Event Queue တစ်ခုရှိမယ် အဲဒီကိုမှ ရှိသမျှ Application တွေက Infinite Loop ပတ်ပြီး လှမ်းလှမ်းဖတ်ရတယ် လွယ်လွယ်ပြောရရင် သူနဲ့ဆိုင်တဲ့ Event များပါသလားပေါ့ ပါရင်သက်ဆိုင်တဲ့အလုပ်လုပ် မပါရင် ဘာမှမလုပ်ဘူးပေါ့ဗျာ။ ဒါက Event ကိုကိုင်တွယ်တာကို နမူနာပြောတာ။ တစ်ခြားမြင်သာတာ ပြောပါဆိုရင် Form တစ်ခု ပေါ်လာစေချင်တယ်ဆိုပါစို့ ကျွန်တော်တို့မှာ ဘာမှလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူး Window ကနေ Form ကလေးပေါ်လာဖို့ အကျယ်အဝန်းဘယ်လောက် ဘာညာပြောပြီး သက်ဆိုင်ရာ API တွေခေါ်မှ Form လေးပေါ်လာပါတယ်။
အပေါ်မှာပြောတာတွေက Window မှာအတွင်းပိုင်း ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာ အကြမ်းပြောထားတာပါ။ ဒီတော့ Win 32 API ကိုသုံးပြီးရေးမယ်ဆိုရင် အထက်ကပြောခဲ့တဲ သက်ဆိုင်ရာ Win API Function တွေကို ကိုယ်တိုင်ခေါ်ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် Win 32 နဲ့ရေးထားတာတွေ ကြည့်လိုက်ရင် Infinite Loop နဲ့ Event စစ်ထားတာတွေ မပါမဖြစ်တွေ့ရပါမယ်။ ဒါကိုလေ့လာခြင်းအားဖြင့် ဘာတွေကို သိလာမလဲဆိုတော့ Window Program တစ်ခု ဘယ်လို အလုပ်လုပ်သလဲဆိုတာ အသေးစိတ်သိလာပါတယ်။ အဆင့်ဆင့်ကို အသေးစိတ်သိတယ်လို့သာ ဆိုလိုပါတယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ API တွေကို ခေါ်သုံးတာဖြစ်လို့ API အထဲမှာ ဘယ်လို အလုပ်လုပ်သလဲတော့ မသိနိုင်ပါဘူး။ ဒါကိုသုံးခြင်းအားဖြင့် ဘာတွေ အကျိုးရှိသလဲဆိုရင်တော့ Performance မှာတော့ Window မှာရေးတဲ့ နည်းစနစ်တွေထဲမှာ အမြန်ဆုံးပါပဲ။ နောက်ပြီးတော့ အသေးစိတ် ရေးသားလို့ ရပါတယ်။
Win32 API တွေက ရေးလို့ရပေမယ့် Application ရေးရင်တော့ အရေးမပါတာတွေ ထပ်ကာတစ်လဲလဲ ရေးနေရလို့ Development Time အလွန်ကြာပါတယ် နောက်ပြီးတော့ ကိုယ်တိုင်သေးစိတ်ရေးရလို့ အမှားများပါတယ် ဒါကြောင့် MFC ဆိုပြီးတော့ အဲဒီ API တွေအပေါ်မှာ ထပ်ပြီးတော့ Class တွေဆောက်ပြီးတော့ လွယ်အောင် လုပ်လိုက်ပါတယ်။ MFC ကျေးဇူးနဲ့ Window Application တွေကို လွယ်လွယ်နဲ့ ရေးလို့ရလာပါတယ်။ MFC လွယ်သည်ဆိုသဖြင့် အထင်မသေးကြပါနှင့် Win 32 API များတိုက်ရိုက် ခေါ်ရသည်ထက် လွယ်သည်ဟု ဆိုလိုပါသည်။ VB, C#, Java များဖြင့် Window Application ရေးသားခြင်းထက် များစွာခက်ခဲပါသည်။ Win32 API များထက် နှေးသော်လည်း အခြားသော Window Programming များထက်တော့ အလွန်ပင် မြန်ဆန်ပါသည်။
ကျွန်တော့်အမြင်မှ အချုပ်ပြောရမည်ဆိုလျင် Window Application တစ်ခုအတွင်းပိုင်း မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကို လေ့လာလိုပါက Win32 API လေ့လာနိုင်ပါသည်။ MFC မှာလည်း Window Specific ရေးမည်ဆိုပါက အချိန်ရှိပါက လေ့လာလိုက လေ့လာနိုင်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် မည်သို့မည်ပုံ အလုပ်လုပ်သည်ကိုတော့ သိထားသင့်သဖြင့် ကျောင်းသားများ လေ့လာသင့်ပါသည်။ သို့သော် Business Application Development အတွက်တော့ နှစ်ခုလုံးမသုံးသင့်ပါ။ Window တစ်ခုတည်းအတွက် Development ပြုလုပ်သော Application များလျော့နည်းလာနေသော အခြေအနေကြောင့် Window Application အတွက်ဆိုပါက အခြားသော Cross Platform နည်းများကို စဉ်းစားသင့်၏။ VC မှာယခုအချိန်အထိ Window အတွက် Strong Language အဖြစ်ရှိနေသည် .Net Platform များအဆင့်မြင့်လာသော်လည်း Native အတွက် VC ဖြင့်သာ VS တွင်ရေးခွင့်ပြုသည် ၄င်းအပြင် ATL မှာယခုအချိန်အထိ ခိုင်မာစွာရပ်တည်နေသည်။ Window Native နှင့် ATL အတွက်အသုံးပြုလိုမှသာ VC ကိုရွေးချယ်သင့်သည်ဟု မြင်မိသည်။ C & C++ ဆိုသည်မှာ VC တစ်ခုတည်းအတွက် မဟုတ်လေသောကြောင့် C & C++ ကိုလေ့လာလိုပါက ၄င်းတို့၏ အခြားသော Feature များကို ပိုလေ့လာသင့်သည်ဟု ယူဆမိပါသည်။
အရင်ဆုံး ကိုလူပျိုရေ ဒီကနေပဲ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။
အဲ.. ဟုတ်တော့ ဟုတ်ပါရဲ့
ကျွန်တော် ဖတ်ကြည့်တော့ဗျာ သိလာတာလေးတွေကိုပြောကြည့်မယ်။
ကောင်းပါတယ်.. သူပြောထားတဲ့ Game Program တစ်ခု စရေးဖို့ ရတဲ့အခြေအနေအထိ သူရှင်းထားတာ ရှင်းလင်းပါတယ်။ Message Box လေးနဲ့ အရင်သူ ရှင်းသွားတယ်။
နောက် ဗဟုသုတ ရစရာ ဟန်ဂေရီ နိုတေးရှင်း ဆိုလား.. သူပြောမှ ဘာကြောင့် ကျွန်တော် ကြည့်ဖြစ်တဲ့ Sample Code တွေမှာ variable name တွေကို ဘာကြောင့် ဘယ်လို declare ပေးထားတာဆိုတာ ရှင်းသွားတယ်။
အဲ.. နည်းနည်းလေကြော ထပ်ရှည်ဦးမယ်..
သူပြောသွားတာတွေက Win API တွေဗျ.. ဒါကြောင့် တစ်လွှဲတွေဖြစ်နေတာ..
Win API မှာ BOOL ဆို C++ က bool နဲ့ တူတူပဲ
WORD ဆိုရင် 16bit Integer, C++ မှာ unsigned short int.
FLOAT ဆိုရင် C++ က float
UINT ဆိုရင် C++ က unsigned int
LPSTR ဆိုရင် long pointer string
LPCSTR ဆိုရင် long pointer to constant string
အဲ့လိုမျိုးတွေ data type သဘောတရားချင်းတွေက တူပေမဲ့ C++ နဲ့ ကွာသွားတာတွေ ကြောင့် လည်တယ်ထင်တာပဲ..